MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » President of Myanmar has appointed U Myo Myint Than as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Thailand
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Myo Myint Than, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the People’s Republic of Bangladesh, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Thailand.
Dated. 21 April 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းအား ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၁ ရက်